मैले देखेको पुरुष हिं सा – ताजा समाचार
मैले देखेको पुरुष हिं सा
हो म पनि एक महिला हो । मैले पनि लेख्नु पर्थ्यो, महिलाका गीत, आमाका कविता अनि महिलाको अधिकारको बारेमा । तर मैले लेखिनँ किनकी यहाँ महिला मात्र कहाँ हो र ! कुनै न कुनै ठाउँमा पुरुष पनि हिं सा मा छन् ।
सबैको मुखबाट सुनिन्छ, पुरुषको मन कठोर हुन्छ । उनीहरु अक्सर सानो कुराले रुदैनन् । अनि भन्छन्, कति धेरै निर्दयी हुन्छन् यी पुरुष जाती ! तर कसैले यो देख्दैन उनीहरुका आँशु त सबै सकिन्छन्, पसिना बनेर । जो हरेक दिन रात आफ्नो परिवारको लागी मिहिनेत गर्दा बग्छ । हरेक रात रोएर काट्दा पनि सधै मन्द मुस्कानका साथ उभिने पुरुष नि र्द यी कसरी हुन सक्छ ?
आखिर कही न कही, कतै न कतै पुरुष पनि हिं सा मा नै त छन् ।
हो, आमा महान छिन् । आमाको मूल्य अमुल्य छ । हामी जन्मिदाँ आमाको शरीरबाट कैयौँ लिटर खुन बग्यो होला । हामीलाई पिलाएको दश धारा दुधको मूल्य कसैगरी चुकाउँन सकिँदैन ।
म मान्छु, आमाले संसार देखाउँछिन् । नौ महिना कोखमा राख्छिन् । उनको पीडा उनको दुख वर्णन गरी साध्य नै छैन ।